पूर्वाञ्चलका प्रमुख ठाउँहरूमा पनि क्रान्तिको आगो सल्किएको थियो
आन्दोलनको समर्थनमा विद्यार्थीहरु सडकमै बसेर पढ्द
अध्यक्ष महतोको राजनीतिक सन्यास्
२३, २४ र २५ गते पूर्णरुपले पुर्व मेची देखी पश्चिम् महाकाली सम्म बन्द गर्नेछ ।
सिरहामा गच्छदारका केन्द्रीय सदस्यको घरअगाडि बम विस्फोट, नगरबासीको भागाभाग
फोरम लोकतान्त्रिले भने, उपेन्द्र, राजेन्द्र र महन्थ ठाकूर नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बम विस्फोट गराएको आंशका गरेको छ ।
थारु विरोधी नेताहरु देउवा, रावल र भट्टको पर्चा बाँडियो
तीन नेताहरु अति कमजोर र डराएका छन् : प्रध्यापक हाछेथु
राज्य बहुजातीय तर शासन एकल जातीय भएकै कारण समस्या उब्जिएको बता। नेपालमा दूरदृष्टि र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको कुनै नेता नरहेको बताउँदै उनले दलका नेताहरूलाई पदाधिकारीको संज्ञा दिए। उनले तीन नेताहरु अति कमजोर र डराएको बताए। बाहिरबाट आफूलाई जति शक्तिशाली ठाने पनि तीन नेताहरुको कमजोरी पहिल्याएर आफ्नो माग पूरा गराउनुपर्ने उनले जोड दिए।
मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा प्रचण्ड र बाबुरामको दौडधूप
केपी ओली र महन्थ ठाकुरलाई भेटेर वार्ताका बस्न दबाव
कांग्रेस र एमालेले गर्ने हरेक निर्णयमा साथ दिँदै आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईको भूमिका मंगलबारदेखि एकाएक बदलिएको छ । .... सत्तापक्षको सहयोगीजस्तै देखिँदै आएका प्रचण्ड र बाबुराम मंगलबारदेखि सत्तापक्ष र आन्दोलनकारीवीच मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा उभिएका छन् । ...... थारु र मधेसीका मागलाई सम्बोधन नगरी जारी हुने संविधान टिक्न नसक्ने निश्कर्षमा पुगेका एमाओवादी नेताहरु मंगलबारदेखि सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच वार्ता गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा उभिएका छन् । यद्यपि उनीहरुको वार्ता गराउने लविङप्रति
सत्तारुढ दलहरुले खासै रुची देखाएका छैनन् ।
....... एमाओवादीका एक नेताले सत्तारुढ दलहरु थारु र मधेसीका जायज माग सम्बोधनका लागि त्यति संवेदनशील नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सप्तरीमा १४ कार्यकर्ताले कांग्रेस छाडे
काँग्रेसका क्रियाशिल सदस्य एवं नेपाल प्राद्यापक संघका पूर्व केन्दि्रय उपाध्यक्ष अमरकान्त झासहितका १४ जना क्रियाशिल सदस्यहरुले काँग्रेस परित्याग गरेका हुन् । उनीहरुले जारी रहेको मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् । .....
'वर्षौदेखि विभेदको शिकार हुँदै आएका मधेसी समुदायलाई गणतन्त्रमा पनि संविधान मार्फत विभेद कायमै राखिएको छ, हामीले पार्टीभित्र विभेद हटाउन धेरै प्रयास गर्यौं, तर सफल हुन नसकेर आज पार्टी नै परित्याग गर्नुपरेको छ'
वीरगञ्जमा आन्दोलनकारीले डिजेल ट्याङ्करमा आगो लगाए
खेताला मधेशी नेताहरूको कारणहरूले नै आज तराई(मधेश)मा नेपाली सत्ता अडकीएको छ : जयकृष्ण गोइत (निजी विचार)
पचास भन्दा बढी वीर मधेशी सपुतहरू जीवनको आहुति दिएर, सयौं जना घाईते भएर पनि तराई९मधेश०मा स्थापित नेपाली शहीदहरू दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ र राणा शासन विरूद्धको सशस्त्र क्रान्तिमा शहादत प्राप्त गर्ने कमाण्डर थीरबम मल्लका प्रतिमाहरूलाई तोडियो। ..... नेपालका राजा त्रिभूवन, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्रका तराईमा ठडिएका सालिकहरूलाई ढालिए।तत्कालीन निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्र र तराईमा सेना परिचालित हुनसक्ने अभिव्यक्तिको साथै मातहतमा रहेका फौजलाई उच्च तयारीमा रहन निर्देशन दिईने नेपाली सेनाका सहायकरथी दिलीप शम्शेर राणाका पुतला जलाए। ...... राणा शासन विरूद्धको सशस्त्र क्रान्तिका कमाण्डर, नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधान मन्त्री तथा निरंकुश निर्दलीय पचायति शासन विरूद्ध आजीवन लडने विशेश्वर प्रसाद कोइराला, निरंकुश निर्दलीय पचायति व्यवस्था विरोधी जनआन्दोलनका नायक ९कमाण्डर० तथा पूर्व मन्त्री गणेश मान सिंह र राणा शासन तथा निर्दलीय पंचायति शासन विरोधी जनआन्दोलनका अगुवा नेता र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रथम महासचिव एवं नेपालका प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका प्रतिमालाई पनि चकनाचूर बनाइयो। ..... नेपालका तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख तथा प्रधानमन्त्री र नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला, नेकपा९एमाले०का महासचिव माधव कुमार नेपाल, नेकपा९माओवादी०का अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल९प्रचण्ड० र गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाका पुतला जलाए। ...... नेपालका आदिकवि भानुभक्त आचार्य, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा र युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ एवं समाजसेवी भरत बहादुर श्रेष्ठ आदिका प्रतिमा तोडफोड गर्यो। नेकपा९माओवादी०, नेकपा९एमाले०, नेपाली काँग्रेसको कार्यालय जलायो। तराईका प्रायः सरकारी कार्यालयहरूको नामपटमा नेपाल सरकार लेखेको ठाउँमा नेपाल पोतेर ुमधेश सरकारु लेखे। यसरी २०६३को माघे मधेश महाविद्रोहले नेपाल र नेपाली मुक्त अर्थात स्वतन्त्र तराई९मधेश०को सन्देश दिए। ......
नेपाली काँग्रेस, नेकपा९एमाले०, नेकपा९माओवादी०का खेताला मधेशी नेताहरू
...... पहाडी परस्त छद्म भेषि मधेशवादी दलहरूका नेता र नेपाली काँग्रेस, नेकपा९एमाले०, नेकपा९माओवादी०का खेताला मधेशी नेताहरूको कारणहरूले नै आज तराई९मधेश०मा नेपाली सत्ता अडकीएको छ ।
मधेश आन्दोलनलाइ बेवास्ता गरे संविधानसभा नै छाडने काँग्रेसका मधेशी सभासदहरुको चेतावनी
नेपाली काँग्रेसका मधेशी र थारु सभासदहरुले मधेशको आन्दोलनलाइ पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरे संविधानसभा नै छाडने चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेसका मधेसी र थारू सभासद्हरूले भने अझै पनि आफूहरूले उठाउँदै आएको माग नयाँ संविधानमा समावेश नहुने र तराईमा जारी आन्दोलनको बेवास्ता गरे संविधानसभा नै छोड्ने चेतावनी दिएका हुन्। सोमबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको मधेसी र थारू सभासद्हरूको भेलामा बोल्ने अधिकांश काँग्रेसका मधेशी र थारु सभासद्हरूले पार्टीले वास्तै नगर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ’संविधानसभाको प्रक्रिया अविलम्ब रोकी आन्दोलनरत समूहसँग वार्ता थाल्नुपर्ने भेलाको ठहर हो,’ काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य एंव पूर्व सभासद् अजयकुमार चौरासियाले भने, ’सबैलाई बाहिर राखेर संवधिान जारी गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, हामी यही कुरा पार्टी नेतृत्वसमक्ष राख्छौं।’
’मधेस र थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हामी सबै सभासद्को घर जल्छ, हिंसा बढ्छ’
, सभासद् डिल्ली चौधरीले भने, ’नेताहरूले मिलाउनुपर्छ, मिल्छ भन्दै आउनुभएको थियो तर तीन दलको साझा संशोधन परेपछि अब त्यो सम्भावना सकियो। मंगलबार नेताहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं।’ संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्र नयाँ संविधानको विधेयकमा पार्टीका तीन शीर्ष नेताबाहेक सबैजसो असन्तुष्ट देखिएका छन्।
परासीदेखि कैलालीसम्म थारु समुदाय र २ नम्बरमा सुनसरी मोरङमा राखेर थारु मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । ...... ‘अहिले विशेषत–तराई-मधेसमा थारु र मधेसी समुदायको आन्दोलन जुन ढंगले सल्कदै गैरहेकोछ त्यसलाई वेलैमा सम्वोधन गरिएन र यो वा उ वहानामा हेप्ने वा चेप्ने काम गरियो भने त्यो भोलि देशको अखण्डताकैनिम्ति जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।’ ..... ‘सुनसरी÷मोरंगका केही भाग २ नं प्रदेशमा राखेर मधेसी समुदायलाई सन्तुष्ट गर्न सकिन्छ भने त्यो देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।’ उनले भनेका छन्– ‘अझै पनि समय बाँकी छ । वलप्रयोग हैन संवाद र सहमतिको बाटो खोजौं । नत्र भोलि धेरै ढिलो हुनसक्छ ।’
आखिर के चाहन्छन् मधेसी नेता ?
एक मधेस प्रदेश सम्भव छैन, अन्यमा वार्ता गरौं
राजनीतिक तथा कुटनीतिक चासो सम्बोधन गर्न काठमाडौंं आइपुगेका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पनि देखिने भनेर नदेखिने गतिविधिमै व्यस्त छन् । यता संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ, उता मधेस दिनदिनै अशान्त बनिरहेको छ । ...... मधेसका सोझा, अशिक्षित, गरिब र पछौटे जनतालाई त्यहाँका धनी, कुलीन र टाठाबाठा बर्गका नेताहरुले आन्दोलनमा उतारेका छन् । यत्तिकै आन्दोलन उठ्न असम्भव देखेपछि एकजना मारिएमा ५० लाख रकम दिने जिहादी प्रकारको घोषणासहित उनीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, मधेसको आन्दोलन सफल भएमा त्यसले के उपलब्धि हासिल गर्नेछ ? यसमा नेतादेखि बुद्धिजीवीहरु अस्पष्ट छन् । ...... पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दक्षिणी छिमेकीसँग सीमा जोडिएको सम्पूर्ण भू-भागको एउटै प्रदेश हुनै सक्दैन । ........ कुल जनसंख्याको ४८ प्रतिशत जनसंख्यालाई एउटा प्रदेश चाहिने, अनि बाँकी ५२ का लागि अनेक प्रदेश बनाउने कुरा सम्भव छैन । त्यही भएर मधेस आन्दोलन, आठ बुँदे सहमति वा अरु जेसुकै कुराको दुहाइ दिएर गरिए पनि मधेस एउटै प्रदेश सम्भव छैन । ....... पछिल्ला पाँच/सात वर्षको आँकडाहरुलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि सरकारी सेवामा मधेसी, जनजाति, महिला, दलित लगायतको पहुँच द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । के मधेसका दलहरुलाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन ? के यो उपलब्धि होइन ? ....... चार दलले पहिला छ र पछि सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्दा दुई नम्बरमा राखेको प्रदेशमा मधेसका जिल्ला मात्रै राखेका छन् । त्यसलाई लिएर उपेन्द्र यादवले जायज प्रश्न उठाए, जानकारी मन्दिरको भेटीले मात्रै प्रदेश चल्छ ? हो, चल्दैन । त्यही भएर प्राकृतिक स्रोत, साधन र विविधता मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिएको हो । ....... समथर भूभागलाई मात्रै एउटै प्रदेशमा राख्ने हो भने भोलि जलविद्यृत् आयोजना कहाँबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ ? सिंचाईका लागि बाँध कहाँ बाँध्नुहुन्छ ? खनिज पदार्थको खोजी कसरी गर्नुहुन्छ ? दुईचारजना टाठाबाठालाई मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुन रहर लागेकै आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न सकिँदैन । ......
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई आफूले जे गर्‍यो, त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रको निर्णय हो भन्ने परेको छ । ...... सबै क्षेत्रका जनताका संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न तीन दल असफल भइरहेका छन् ।
अन्त्यमा, निर्णय गर्दा विचार नपुर्‍याउने र पछि निर्णय परिवर्तन गर्ने तीन दलको कार्यशैलीले आन्दोलनमा बल पुर्‍याइरहेको छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा,
एक मधेस प्रदेश बाहेकका मधेसका जायज मागहरु वार्ताको टेबुलबाट समाधान गरिनुपर्छ ।
एमाओवादी-मधेस ‘कनेक्सन’ र प्रचण्डमाथि यक्ष प्रश्न
'कहाँनेर गर्नुहुन्छ प्रचण्डजी थारु र मधेसीको सम्बोधन ?'
ग्रामीण क्षेत्रमा राजनीति र समाजबीचको सम्बन्धमा माओवादी जनयुद्धले आमूल परिवर्तन ल्याएकै हो । ...... एमालेले जतिसुकै वर्गको कुरा गरे पनि ग्रामीण समाजको शक्ति समीकरणमा माओवादी जनयुद्धले जोडदाड धक्का दिएको थियो । असङ्ख्य दलितहरू गाउँ जनसरकार प्रमुख भएका थिए । ......
गाउँ देहातका मधेसी समाजमा कुनैबेला एउटा लाठी बोकेको पुलिसले दसजना मधेसीलाई सामान्य कसुर बापत बाँधेर लान्थ्यो ।
माओवादी जनयुद्धले त्यस्ता निमुखा देहाती मधेसीहरूलाई बन्दुक बोक्न मात्र सिकाएन, दिनदहाडै प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण पनि गर्न सिकायो । ........ मानिसको आकार र पशुको प्रकारले जीवन ज्युन बाध्य गाउँ देहातका दलित, मधेसीहरूमा माओवादी जनयुद्धले आत्मविश्वास जगाएकै हो । ......
नेपाली राजनीतिमा ०४६ साल यता मधेसको मुद्दा उठाउने सदभावना पार्टी मात्र थियो, जसलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेले पालैपालो हाँसोको पात्र बनाउँथे ।
..... १६ बुँदे सहमतिमा एमाओवादी नेताले ल्वात्तै मधेसी मोर्चालाई छोडिदियो । विजय गच्छदारलाई सत्ताको लोभ देखाएर मधेसी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने योजना ल्याइयो । ...... ०५२ सालमा थालिएको जनयुद्धले पहाडी जिल्लाहरूमा राम्रो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएपछि ०५८/२०५९ सालतिर माओवादीहरूलाई मधेसमा प्रभाव विस्तारको हतारो थियो । यसैक्रममा विभिन्न मोर्चाहरू निर्माणसँगै मधेसी मुक्ति मोर्चा पनि गठन भयो । ........ मधेसका राजनैतिक समस्याहरूलाई उठाइदिने राष्ट्रियस्तरको पार्टीमा माओवादी पहिलो र प्रभावशाली पार्टी बन्यो । मधेसको समस्या मूलतः आन्तरिक औपनिवेशीकरणको समस्या रहेको, मधेसीमाथि जात, क्षेत्र, समुदाय, रङ्ग र भाषाको आधारमा विभेद भएको कुरा माओवादी जनयुद्धका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएकै कारण मधेसमा माओवादीहरूको तिब्र गतिमा विस्तार भयो । ...... अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता उल्लेख नभएपछि भएको मधेस विद्रोहपछि मधेस राजनीतिमा फोरमको उदय भयो । फोरमसँग भएको २२ बुँदे सहमति लागु गर्न तीन ठूला दलहरू अनिच्छुक देखिएपछि ०६४ सालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)को जन्म भयो । ......... ०६४ सालको मधेस आन्दोलनले तीनै ठूला दलहरूसँग सङ्घीयताको मात्रै पुनःग्यारेन्टी गराएन, राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यमा समावेशीकरण हुने पनि किरिया खुवायो । त्यतिबेला ८ बुँदे सहमति भएपछि मात्र ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भएको थियो ....... संविधान निर्माणको राजनीतिमा माओवादी र मधेसी दलहरू एउटै कित्तामा अडिरहे । ...... पहिलो संविधानसभामा सबै मधेसी दलहरूको केवल ८६ सीट थियो । हालको सभामा त्यो सिट घटेर ५० को हाराहारीमा पुगेको छ । कुल ६०१ को संविधानसभामा सङ्ख्यात्मक हिसाबले मधेसीहरूको सीट न त हिजो निर्णायक थियो, न त आज छ ....... सङ्घीयताको सीमाङ्कनबिना नै संविधान जारी गर्ने कुरामा प्रचण्डजीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।........
आज फेरि एमाओवादीले थारू र मधेसीको माग पूरा गराउन प्रयास गर्ने सुनिँदैछ । अब त संविधान घोषणा हुन मात्र बाँकी छ, अब कहाँनिर के गर्नुहुन्छ प्रचण्डजी थारु र मधेसीको मागको सम्बोधन ?
....... ६ प्रदेशलाई सच्चाउने नाममा सात प्रदेशको खाका ल्याइयो । त्यसपछि पश्चिम तराईमा थारुहरू हिंस्रक भए । प्रचण्ड र बाबुरामजीले भन्नुभयो, हामी थारूहरूको माग पुरा हुनुपर्ने पक्षमा छौँ । थारूहरूको संघर्षमा हाम्रो सहानुभुति छ । ...... धेरैलाई लागेको थियो, संशोधन प्रस्तावमार्फत् ७ प्रदेशको खाका अब ८ प्रदेश हुनेछ । प्रचण्ड र बाबुरामले नै साथ दिएपछि अब विजय गच्छदारको नक्कली र पश्चिमा थारूहरूको सक्कली चाहना कसो पूरा नहोला ? ...... तर एमाओवादीसहित तीन दलले संयुक्त संशोधनका प्रस्तावहरू दर्ता गराए । मिलन विन्दुका व्यापारी भनेर चिनिएका
विजय गच्छेदारको क्रन्दन पनि कसैले सुनेनन् ।
अनिच्छापूर्वक नै सही उनी पनि बाहिरिन बाध्य भए । ........
नेपाली कांग्रेस र एमालेले गच्छदारको नक्कली बहिर्गमनपछि पनि संविधान जारी गरिछाड्ने हुँकार दिए । प्रचण्डजीले फेरि भन्नुभयो, यसरी बन्ने संविधानको स्वामित्व हामी ग्रहण गछौर्ँ । र, आज फेरि एमाओवादीले थारू र मधेसीको माग पूरा गराउन प्रयास गर्ने सुनिँदैछ । अब त संविधान घोषणा हुन मात्र बाँकी छ, अब कहाँनिर के गर्नुहुन्छ प्रचण्डजी थारु र मधेसीको मागको सम्बोधन ?
मधेस आन्दोलन किन गंगा स्नान बन्दैछ ?
पच्चीस दिनदेखि मधेस बन्द छ । भारदहदेखि सुरु भएको हिंसाको दौड कैलाली पुगेर फर्कियो, भैरहवा हुँदै वीरगञ्ज पुगेर त्यो रोकिएको छ ......
यसबीचमा काठमाडाैंमा टिकापुर नरसंहारमा जति आँशु बगाइयो, डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि जति कामना गरियो वा वीरगञ्जमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सालिक भत्काएकोबारे जति चर्चा भयो, मधेस आन्दोलनमा मारिएका सहिदहरूको नाम पनि त्यतिपटक उच्चारण गरिएन ।
..... भारदहदेखि गौरसम्म, वीरगञ्जदेखि भैरहवा र कैलालीसम्म मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन भइराख्यो तर द्वन्द्वका देशी, विदेशी व्यापारीहरू काठमाडौंमा रमाइरहे । ...... मगंलबारदेखि अचानक मधेस आन्दोलनप्रति सहानुभुतिको ओइरो लाग्न थालेको छ । यी हरफहरू लेखिरहँदा काठमाडौंको अनलाइन पोर्टलहरूमा विजय गच्छेदारले संविधानसभाको प्रक्रिया छोडेको समाचार आयो । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सय बढी काँग्रेसी सभासदहरू बालुवाटार पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने माग गरे । एमाओवादी वृतभित्र मधेसी र थारूहरूको हितमा कसरी लविङ गर्ने भन्ने योजना बन्दैछ ।
प्रचण्ड निवासमा मधेस विखण्डनतिर जान लागेको त्रासयुक्त चर्चा हुँदैछ ।
....... मधेसका २० जिल्लाको ११६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेस एक्लैले ५१ निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको छ । एमालेले ३७ सिट जितेको छ । सबै मधेसी दलले केवल १२ सिट जितेका हुन् । सामानुपातिकतर्फ कांग्रेसले मधेसमा साढे दस लाखको हाराहारीमा मत पाएको थियो भने त्यसभन्दा एकलाख घटी एमालेले पाएको थियो । दर्जनबढी सबै मधेसी दलहरूको मत जोड्दा पनि नेपाली कांग्रेस जति पुग्दो रहेनछ । त्यसैले राजनीतिलाई केवल निर्वाचनको परिणाम र सिट सङ्ख्याको रूपमा हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्नेहरूका लागि मधेसमा आन्दोलनको सम्भावना नै थिएन । तर भयो ठीक उल्टो । ......... दस वर्षअघि २०६३ सालमा लहानबाट आन्दोलन उठेको थियो, सारालाई चकित तुल्याएको थियो । त्यो आन्दोलनले पश्चिम तराईलाई हल्का मात्र छोएको थियो, कैलाली कञ्चनपुरसम्म त पुग्नै सकेको थिएन । यसपालि पश्चिमको कैलालीबाट आन्दोलन उठ्यो, जो धेरैलाई विश्वासै नलाग्ने गरी हिंसाको अपवाद उदाहरण बन्न पुग्यो ।
आज पुरै तराई मधेस आन्दोलित छ । ठप्प छ ।
आखिर यस्तो किन भयो ? ....... आमरूपमा निर्वाचनलाई नेताहरूको कारोबारको रूपमा बुझिन्छ । कसलाई भोट दिने र कसलाई नदिने सवालमा मधेसी समाजले सम्बन्धित उम्मेदवार नेताको सत्ता र शक्तिसँगको सम्बन्धको आधारमा नापजोख गरेर छान्ने गर्छन् । ..... संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन फरक परिवेशमा भएको थियो । राज्यको न्युन उपस्थिति, आन्दोलनको खास उत्कर्षको बेला उमङ्गका साथ मधेसी समाजले मधेसी दलहरूको पक्षमा मतदान गरेका थिए । ........ तर तिनको उमङ्गमा सबै पक्षबाट प्रहार भयो । मधेसी दलहरू विभाजित भए, नेताहरू सत्तारोहणमा मस्त भए, राज्यले आफ्नो उपस्थिति पुनस्र्थापित गर्‍यो, प्रहरी र प्रशासनले खोजी–खोजी अगुवा मधेसी कार्यकर्ताहरूलाई सशस्त्र समुहको सदस्यको आरोपमा सुट गरे । अनेकौंलाई अपहरण र लुटपाटको मुद्दामा फँसाइयो । फलत: अधिकांश मधेसी दलका कार्यकर्ताहरू आफ्नो पुरानै घर कांग्रेस र एमाले फर्के । दलहरूको विभाजनको कारण छँदैथियो, नतिजा मधेसीदलहरूको ‘बुरा हाल’ भयो । ........ २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि नै मधेसी समाजले नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली पहिचानमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको हो । मधेसीहरूले भन्दै आएको छ, हामी फरक हौं । हामी पृथक हौं । हाम्रो पहिचान पृथक छ । ..... पञ्चायतकालभरी नेपाली राज्यले मधेसी पहिचानलाई समाप्त गर्ने र भारतीयको रूपमा चित्रण गर्ने काममा लागिरह्यो । दौरा, सुरुवाल, टोपी, नेपाली भाषालाई शिक्षाको माध्यम र रोजगारको उपाय बनाइयो । राजनीतिमा असमान प्रकारले सीट वितरण गरियो । सेना र पुलिसको भर्नामा अघोषित प्रतिबन्ध लगाइयो । मधेसका जिल्लाहरूमा प्रहरी, प्रशासनको कार्यशैली औपनिवेशिक प्रकारको बनाइयो । आज पनि मधेसीको पृथक पहिचानको कुरा गर्नेलाई पृथकतावादीको आरोप लाग्नेगर्छ । .........
आम मधेसीले अहिलेको आन्दोलनलाई अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन बुझेका छन् । निर्वाचन नेताका लागि हुने हो तर आन्दोलनले सबैलाई अधिकार दिलाउने बुझाई छ ।
....... १६ बुँदे सहमतिको ‘लिडटेकर’ चार पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरू भएपनि त्यसको ‘डिलमेकर’ तीन पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू थिए, जसमा एउटा पनि मधेसी, थारूलाई समावेश गरिएन । यसले कांग्रेस र एमाओवादीभित्रको मधेसी नेताहरूलाई बिच्कायो । .........
सङ्घीयता मधेसी समाजको मुटु भएकोले कुनै पनि दलका मधेसी नेता सङ्घीयतालाई थाती राख्ने प्रस्तावबाट खुशी थिएनन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानले ग्रामीण तहको मधेसीलाई झक्झकायो र आन्दोलित तुल्यायो । ६ प्रदेशको खाकाले मधेसी समाजमा जो कोहीलाई पनि खेलमा झेल भएको महशुस गरायो । सात प्रदेशले थारूहरूमाथि घोर अन्याय भएको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तरंग पैदा गर्‍यो । आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको क्रुर दमन, छाति र टाउकोमा ताकी–ताकी गोली हान्ने कार्यले आम मधेसी समाजलाई क्रोधित तुल्यायो, जसले आन्दोलनलाई नयाँ उचाई दियो ।
आजको मधेस आन्दोलन गंगा स्नान जस्तो भएको छ ।
तराई मधेसका नागरिक तथा पहाडका आदिबासी जनजाति, दलित समुदायको असन्तुष्टी रहेको संविधानले समस्या समाधान भन्दा बल्झाउँछ उहाँहरूको सामुहिक सुझाव थियो । ......
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ..... तराईका आदिबासी थारू, मधेसी, पहाडका जनजाति, दलित, मुश्लिम, पछाडि परेका वर्ग कसैको अधिकार यो संविधानले सुनिश्चित् गर्न गइरहेको छैन उहाँले भन्नुभयो । .... नेताहरूको चरित्र ०६२०६३ सालको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै जस्तै देखिदैछ .... राज्य निरंकुश बन्दैगए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गुहार्न सकिन्छ
....... पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले बहुसंख्यक जनता असन्तुष्ट रहेका बेला जारी हुने नयाँ संविधानको अर्थ नरहने बताउनुभयो । ..... आन्दोलन त पहाडकाले मात्रै गरे कि क्या हो, उनीहरुको माग त सुनियो । तर तराईका थारुहरुले आन्दोलनै गरेनन् कि ? ...... मान्छे नमर्दासम्म माग सुनुवाई नगर्ने नेताहरूको चरित्र नै समस्याको जड भएको ..... प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले राज्य बहुजातीय तर शासन एकल जातीय भएकै कारण समस्या उब्जिएको बताउनुभयो । नेपालमा दूरदृष्टि र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको कुनै नेता नरहेको बताउँदै उहाँले दलका नेताहरूलाई पदाधिकारीको संज्ञा दिनुभयो । .....
अहिलेको नेताको नेतृत्व क्षमता, चरित्र र वौद्धिकता नभएकै कारण समस्या समाधानमा कठिनाई भइरहेको
..... वास्तवमा अखण्डको नारा सबैभन्दा पहिले प्रचण्डले अखण्ड चितवनको कुरा उठाउँदा नै जरो गाडियो । जुन संघीयताको विपरित थियो । ..... फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मण थारूले अवको निकास पहाड नजोडिएको तराईमा ३ प्रदेश ..... थारू अराउण्ड वल्र्डका अध्यक्ष तथा थारू अगुवा महावीर चौधरी
तराई–मधेसको आन्दोलन देशकै अखण्डताका निम्ति जोखिमपूर्ण हुनसक्छ : डा. भट्टराई
‘एउटै झिल्कोले डढेलो लगाउन सक्छ भन्ने प्रसिद्ध लोकोक्ति छ, सानो वा कमजोर भनेर हेपियो भने त्यसको परिणाम भयंकर हुनसक्छ भन्ने त्यसको आशय हो ।’
कृष्णनगरमा मधेसी महिलाद्वारा झाडुसहित प्रदर्शन
मधेसका माग पूरा नगर्ने सत्ता साझेदार दलका नेताहरुलाई मधेसका जनताले कसिंगर बढारेर फाले जस्तै पाखा लगाउने सांकेतिक सन्देशसहित झाडुसहित प्रदर्शन गरिएको सभासद अभिषेकप्रताप साहले जानकारी दिए ।
जनकपुरमा झडप, मधेसी मोर्चाका जिल्लास्तरीय नेतासहित १४ जना घाइते
Constituent assembly constitution federalism janakpur madhesi madhesi janajati kranti 2015 mahottari Nepal Terai tharu